Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Uru Ahụike Ọhụrụ 18 dị egwu mgbe ị na -anụ ụtọ mmanya French
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ahụike • News • Tourism • trending Ugbu a • Mmanya & mmuo
Nbanye n'ime ngwa nju oyi na kabinet mmanya na GRRRR. Karama ahụ buru ibu!
Achọrọ m otu iko mmanya (ikekwe ntakịrị karịa) - mana ọ bụghị karama. Ihe a ga-eme?
Gwakọta gin na tonic ma ọ bụ scotch na nkume, ma ọ bụ dozie maka Diet Coke (ọ bụghị ihe ọzọ ga -ekwe omume)?
Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ, akpọchiri m n'ime oghere nke yiri ka ọ na -adalata, nkeji kwa nkeji. Elekere dị na kọmputa m yiri ka ọ na -agba nwayọ nwayọ, ọ na -ewekwa ruo mgbe ebighi ebi iji ruo oge iji kwụsị. N'ikpeazụ, ọ bụ 5 PM, oge kwesịrị ekwesị iji mechie ma mepee karama mmanya French.
Ihe onyonyo mmanya French
Enwere ọtụtụ ọkwa ihe ụtọ na -emetụta echiche nke mmanya French: ọmarịcha chateaux ochie, ubi vaịn na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ; osisi vine ndị a na -ekokwasị na mkpụrụ vaịn na -agbawa nke ọma; ikuku ọhụrụ na -atọ ụtọ, na -adịkwa mma nke na -emejupụta ahịhịa na ngwa nri; mkpọtụ aesụ na -ewepụta nectar iji nye ndị ọrụ ha nri.
Ọzọkwa, e nwere mmanya n'onwe ya. Iko mmanya French adịkarịghị aghụghọ - ị hụrụ ihe na -akụ imi gị n'anya, kpuchie ire gị, nọrọ obere oge n'ọnụ gị, wee hapụ ebe nchekwa na -eleta ngwa ngwa wee jiri nwayọ pụọ ... ị naghị.
Ruo ọtụtụ narị afọ, ihe ọ theụ theụ mmanya France bụ ihe ọ coveụ ,ụ na -achọsi ike, nke a hụrụ n'anya, nke na -atọ ụtọ gburugburu ụwa. Echiche French nke "ụjọ" gụnyere ihe niile site na mpaghara mpaghara ruo acidity nke ala - ha niile na -emetụta ma na -emetụta ogo, ụtọ, isi, na ụtọ nke mkpụrụ vaịn ejiri mepụta mmanya.
N'akụkọ ihe mere eme niile, ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi emetụtala mmanya, site na okpomoku zuru ụwa ọnụ ruo n'ichepụta ụlọ ọrụ, na mmegharị ndị mmadụ, ruo imirikiti ihe omume ndị ọzọ na -adịghị ahụkebe na enweghị ike ịchịkwa ya. Ugbu a, ihe ịma aka na-eche ndị na-a wineụ mmanya French gụnyere tarifụ, igbu oge mbupu, ụkọ akpa, mbata n'oge, mgbanwe ego na “enyí n'ime ụlọ,” COVID-19. Site na nsogbu niile chere azụmaahịa mmanya French, ụlọ ọrụ na -ewe ihe dị ka ndị ọrụ 558,000 (2017), ndị mmadụ na -atụ egwu na ọtụtụ ubi vaịn ezinụlọ agaghị enwe ike iguzogide mwakpo dị ugbu a ma ọ bụ mechie ma ọ bụ resị ndị na -emepụta mmanya buru ibu.
Eziokwu nke ihe ijuanya nye ahịa mmanya mmanya France bụ ihe ijuanya ebe ahịa France maka mmanya dị mma, Bordeaux na Burgundy na-aza ajụjụ n'otu n'otu maka ihe ruru pasent 50 na pasent 20 nke ọrụ azụmaahịa na 2019 (Live-ex. com). Ọ dabara nke ọma, enwere ozi ọma - na ọkara mbụ nke 2021, France na -ebupụ nde hectolite mmanya nde 7.3 nke ọnụ ahịa ya bụ ijeri euro 5.1 na -anọchite anya mmụba nke pasent 15 site na olu na pasent 40 site na uru ma e jiri ya tụnyere ọnwa isii mbụ nke 2020, n'oge mkpọchi. . Mbupụ mmanya French na-akarị nke mbụ n'oge COVID ma na-alaghachi na ọnụego uto karịa ihe ngosi pre-COVID.
Ahịa America na -azụtakwa mmanya French ọzọ ebe ọ bụ na nkwụsịtụ ụtụ Trump/Airbus maka mmanya ka na -agụ, ịghara ịkọwa mbubata mmanya na -egbu maramara, gụnyere Champagnes. N'April 2021, France na -ebupụ 221,000 hectoliters mmanya nke ọnụ ahịa ya na Euro 208 nke ruru oke pasent 90 na mmụba uru pasent 131 ma e jiri ya tụnyere Eprel 2020 (vitisphere.com).
Uru mmanya na -arinụ
Ọ bụ ihe na -emesi obi ike ịmara na ịppingụ otu iko mmanya French dị mma maka ahụike m dịka mkpụrụ vaịn bụ isi mmalite nke ọtụtụ uru. Mmanya na -enye manganese, potassium, iron, phosphorus na vitamin B6. Ọ nwekwara magnesium, mineral nke nwere ike inye aka belata ọbara mgbali na ọkwa shuga, belata ihe egwu nke ọrịa obi, ọrịa shuga na ọrịa strok. Ndị antioxidants dị na mmanya na -alụ ọgụ mmebi sel na ahụ anyị nke mere agadi na ihe gburugburu ebe obibi dịka mmetọ na ibi ndụ. Site na igbochi na ịtụgharị mkpụrụ ndụ a mebie nri dị elu nke antioxidants nwere ike belata ihe egwu nke ịmalite ọrịa na -adịghị ala ala gụnyere kansa.
French Wine bụ nri dị mma maka ndị na -anwụ anwụ n'ihi na enwere naanị kalori 121 n'ime mililiter 150 nke mmanya ọcha na ị siụ mmanya na -egbu egbu nwere ike ịkwalite ahụike akụrụ, ma chebe megide ọrịa Alzheimer. Mmanya na -acha ọbara ọbara (nwere kalori 127) nwere ọdịnaya vitamin na mineral dị elu ma nwee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugboro iri ọnụ ọgụgụ polyphenols (ogige ihe ndị nwere ihe antioxidant) dị ka mmanya ọcha.
Yabụ - enwere akụkọ na ozi ọma. Mmanya mmanya French dị na USA na ọ bụghị naanị na ha na -atọ ụtọ nke ọma, mana ha dịkwa mma maka ahụike m.
Otú ọ dị, m ka nwere nsogbu nke nha karama. A na -anabata karama nke nwere ounce mmiri mmiri dị 25 dị ka ọkọlọtọ maka mmanya. N'oge na -adịbeghị anya, obere karama abatala ebe niile. Amaghị mmetụta nke obere karama na oriri ọ bụ ezie na obere karama nwere ike ibelata oriri site n'ịbawanye mbọ a chọrọ iji mepee ma rie ihe karịrị otu karama. Obere karama nwekwara ike ịbawanye oriri site na mbenata ihe mgbochi wee nwekwaa ugboro ugboro ị drinkingụ mmanya. Ọnụ mmanya a na -etinye n'ime karama pere mpe nwere ike bụrụ nke pere mpe. Nnyocha e mere na -atụ aro na ikpughe ihe anya na oke akụkụ nwere ike ịhazigharị nghọta nke ihe bụ oke "nkịtị". Ọ bụrụ na -achọpụta na obere karama pere mpe, nke a nwere ike ibute ị overụbiga mmanya ókè, n'amaghị ama, ebe a na -emepe karama ọzọ ma na -ere ya n'oge mmemme mmanya.
Hụrụ Azịza ya
Ozi ọma ahụ bụ na mmanya LGV dị na silinda rọba 6.3 ounces (sentimita asatọ n'ogologo, dayameta nke ntakịrị ihe karịrị sentimita 8 nwere okpu mkpuchi), na -enye ntakịrị ntakịrị karịa nkezi ego a wụsara n'ime iko mmanya na -eme. ịpụ mmanya zuru oke ka m nọ naanị m n'ihu ihuenyo kọmputa m, na -agbalị ịmụrụ anya n'oge nzukọ Zoom.
Ọ bụ ezie na nha otu a bụ ihe na-akpali m ịchekwa mmanya na-acha ọbara ọbara na mmanya LGV n'ime ụlọ mmanya m wee jụ oyi n'ime friji, achọrọ m ị drinkụ mmanya dị mma ma ọ bụ dị mma karịa ihe ọ bụla dị na nha.
Ozi ọma ndị ọzọ. LGV esorola ọtụtụ ndị na-azụ mmanya na-eduzi ma ọ bụ na-eduzi ya, gụnyere Elisabeth Prataviera (Domaine de Menard & Haut-Marin), Ines Andrieu (Domaine de Caylus) na Martine Nadal (Domaine Nadal Hainaut)-ha niile metụtara ubi mkpụrụ osisi na-arụ ọrụ na-adigide. ugbo.
Site na karama plastik pere mpe, mmanya ndị ahụ zuru oke, na -agba ume nnwale na nyocha nke mmanya na -acha ọbara ọbara, ọcha na rose sitere n'aka ndị na -emepụta mmanya.
1. Ines Andrieu. Domaine Caylus Rose Blend 2020. Ngwakọta nke mkpụrụ vaịn a kụrụ n'ubi na -eji Syrah (pasent 60) na Grenache (pasent 40).
Site na mpaghara ndịda France (Pays d'Heralult-akụkụ nke mpaghara Languedoc-Roussillon buru ibu), nke a bụ ịhụnanya na mbụ mmanya mmanya na-acha ọbara ọbara (enwere m ike ịse onyinyo ihu igwe nke coral/pink na-esighị ike). Isi a na -eme imi m obi ụtọ ka ọ na -enye nkọwa nke strawberry na citrus. Ọ na -atọ ụtọ okpo ọnụ site na aro apụl, painiapulu na obere ahịhịa. Zuru oke maka ị drinkụ mmiri n'akụkụ ọdọ mmiri ka anwụ na -ada na ndị ịsa ahụ na -alaghachi azụ iji kwadebe maka nri abalị.
2. Gerard Damidot. Chateau Val d'Arenc Bandol 2020. Ngwakọta nke Mourvèdre (pasent 80), Grenache (pasent 10) na Consault (pasent iri).
N'ịbụ nke dị na Provence (ngafe ugwu, Quartier Val d'Arenc), onye na -ese mmanya Gerald Damidot (sitere na Burgundy) na -elekọta ala ahụ nke gbanwere ubi -vine ahụ ka ọ bụrụ omume ịkọ ugbo (2015) na usoro a na -emetụta nke ọma na mkpụrụ vaịn. Ala ubi -vine mejupụtara limestone, fossils, marl aja, ụrọ marly na nkume aja aja na -enweghị ọgwụ ma ọ bụ kemịkal n'ebe ọ bụla; ọrụ ịchacha na iwe ihe ubi na -eji aka emechaa. A na -ahụta Bandol ka ọ bụrụ rose kacha mma nke France na -enwekarị ọkwa karịa 90.
Bandol na -enye anya na -acha odo odo na -acha odo odo, na -ebunye vibes nke piich na -acha ọcha, mkpụrụ osisi grape, mkpụrụ osisi strawberry, lemon na wayo na imi, ebe mkpụrụ osisi na citrus na -atọ ụtọ. A acidity na -enwu enwu na -eme ka ọ bụrụ BFF zuru oke maka salads, quiche, bouillabaisse, na ihe ọkụkọ ọkụkọ na -amịkpọ oyi.
3. Aha ya bụ Elisabeth Prataviera. Domaine de Menard. Sauvignon Blanc (pasent 100) 2020.
Ubi ubi vaịn dị hectare 150 dị na obere obodo Gondrin, na mpaghara IGP nke Cote de Gascony na oke egwu oge ochie ebe a na-akụ osisi vaịn na ala na-emighị emi, stony, nke nwere fosil na-eji naanị fatịlaịza organic. A na -emecha ihe ubi n'abalị ma ọ bụ n'isi ụtụtụ.
Ihe na -amasị anya bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmiri dị ọcha nke nwere isi ọla edo. Chee echiche okooko osisi na mkpụrụ osisi (ọkachasị mkpụrụ osisi grepu, apụl, na lemons) nke na-ewepụta imi dị ka mmiri. Ọtụtụ okooko osisi karịa mkpụrụ osisi na -eji okirikiri nkwado dị ịtụnanya na obere acidity kpuchie okpo ọnụ ya. Zuru oke maka iri nri opupu ihe ubi na ọkọchị nwere salmon na ọdụ lobster mmiri oyi ma ọ bụ nwee ọ enjoyụ dị ka "naanị gị."
4. Martine na Jean-Marie Nadal. Martine Nadal kwuru. Nadal-Hainaut. Cabernet Sauvignon (pasent 100) 2019.
Jean Marie Nadal bụ ọgbọ nke ise na ala nke nwere hectare 43 kụrụ osisi vaịn n'ime obi Languedoc-Roussillon (malite na 1826). Dịka onye nwe ya na onye na -a wineụ mmanya, Nadal na -akwado ọrụ ugbo na -adigide ma na 2010 gbanwere ọrụ ahụ ka ọ na -arụ ọrụ ugbo. A na -egbute mkpụrụ vaịn n'ụtụtụ ma jiri aka ha were ya wee tinye ya na tank. Emeela agadi na gbọmgbọm osisi oak ọhụrụ.
Ọ bụrụ na nnukwu odo odo gbara ọchịchịrị na -amasị gị na isi ụtọ nke cherị ojii chara acha na osisi mmiri (nke dị n'ime ọhịa), mkpụrụ osisi a mịrị amị, plọm na mkpụrụ osisi na -acha ọbara ọbara na -atọ gị ụtọ, na -ebunye tannins obi ike… bụ echiche gị maka mmanya dị ụtọ, ị ga -abụ onye ọ camụ mara ụlọikwuu nwere ahụmịhe ụtọ a. Jikọta ya na anụ ehi a mịrị amị, anụ ezi ma ọ bụ pasta.
5. Laurence na Stephane Dupuch. Peyredon Crus Bourgeois Haut-Medoc 2019. Ngwakọta nke Cabernet Sauvignon (pasent 63), Merlot (pasent 37).
Crus Bourgeois bụ nhazi ọkwa mmanya nke Bordeaux, France nke ebido na 1932 wee maliteghachi na February 20, 2020. Ọ na -ekpuchi naanị mmanya na -acha ọbara ọbara nke emepụtara na mkpesa asatọ na mpaghara Medoc mpaghara Left Bank nke na -ejikọtaghị ọkwa 1855 nke mmanya, mana ugbu a weere dị ka "ezigbo." A na -eme nhazi ọkwa a kwa afọ ise.
Ubi vaịn dị hekta 24 dị na Poujeaux. Garnet hues na -akwụghachi anya anya mgbe imi na -atọ ya ụtọ na mkpụrụ osisi, toast ọhụrụ na obere ose dị ụtọ. Ala na ụlọ na-emepụta mmanya nke osisi oak French nke nwere ụda ojii-currant mara mma yana ihe atụ nke vanilla, ụtaba, blakberị, plums na akpụkpọ anụ. Jikọta ya na anụ ehi, anụ ezi na anụ ghere eghe.